12 Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 12 Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba ngololiwe eRashiya, Uloliwe eSwitzerland, Uloliwe iTurkey, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 28/03/2021)
Imibala, ezingaqhelekanga, kunye neempawu ezingaqhelekanga kunye nendawo yokuhlala, uya kuzifumana ezi 12 Izilwanyana zezona zilwanyana zibalaseleyo eYurophu. Umi elwandle, phezulu Alps, okanye uphumle kwimithi eluhlaza yaseYurophu, Qiniseka ukuba ujonge ezi zilwanyana zasendle zingummangaliso kwi-escapade yakho elandelayo eYurophu.
1. Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu: I-Lynx yaseYurophu
Ukuhlala eSwitzerland, Fransi , ElamaTaliyane, kunye neCzech Republic, I-European Lynx yinyama yasendle ekhethekileyo. ILynx inomsila omfutshane, uboya obomdaka ngamachokoza, Kulula ukuyibona kwihlathi lasebusika elinekhephu.
Uya kuyifumana le kati yasendle inomdla wohlobo lwekati yasekhaya, kunye nengwenkala enamachokoza asendle.
Ndingayibona phi iYurophu yaseLynx eYurophu?
the Ihlathi wohlobo yindawo emangalisayo yokubona iiLynxes kunye nenzala yazo.
2. Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu: Ipuffin
Ungazibona ezi zilwanyana zintle ukusukela phakathi ku-Epreli ngamatye aselunxwemeni. Umzekelo, ISkomer Island eseNtshona yeWales yindawo entle yezilwanyana zasendle kunye nePuffin yokufota. Ukwengeza, Unxweme lwaseBrittany yenye indawo emangazayo yokubuka intaka yaselwandle iAtlantic.
Iipuffins zifikelela kwi 30 cm ubude kunye 20 cm ukuphakama. Ngaphezu, ngomlomo o-orenji kunye nezangqa emehlweni, uya kufumanisa ukuba kulula kakhulu ukuzibona ezi ntaka zolwandle zintle emaweni aselwandle. nge 90% kubemi bonke behlabathi eYurophu, ungancoma iikholoni ezipheleleyo kunxweme lwaseYurophu uninzi lonyaka.
Ndingazibona phi iiPuffins eYurophu?
Unxweme lwaseBrittany eFrance naseSkomer Island ziindawo ezintle apho ungabona khona iPuffin.
3. Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu: ISaiga
ISaiga yinyamakazi ekhethekileyo, ngebhadi, sengozini kule mihla. I-Saiga yenye ye 12 uninzi lwezilwanyana ezizodwa onokuzibona eYurophu. Ngempumlo engaqhelekanga, esi silwanyana sahlukileyo sinokuziqhelanisa nemozulu ebandayo neshushu, ukusukela ukuba ifom yempumlo isebenza kule njongo.
ngoko ke, iSaiga ayinakhaya eliqingqiweyo kwaye inokufudukela ukuya 1000 km phakathi kwehlobo nobusika. Ngaphezu, inokuhamba ngeekhilomitha ezininzi ngemini kwaye isebenza kakhulu emini. Inqaku elinomdla malunga neSaiga kukuba ukongeza kwizityalo nengca, itya izityalo eziyityhefu kwezinye izilwanyana.
Ndingayibona phi iSaiga eYurophu?
Ungayibona iSaiga kwiintaba ezintle zeCarpathia kunye namahlathi.
4. Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu: IPine Marten
Ukuba kunokwenzeka uhambe ezintabeni ngamahlathi ase-Europe kunye nehlathi elinamathuba amahle okuba udibane nePine Marten eyahlukileyo. I-Pine Martens ihlala kwimingxunya yemithi kwaye ilungile abakhweli, Qiniseka ukuba ujonge phezulu ukuba ufuna ukubona esi sidalwa sikhethekileyo.
IPine Martens ikumbala omdaka we-chestnut, nebhayibhile ekhanyayo emthubi entanyeni. Ke ngoko nasehlathini, Kuya kuba nzima ukuphoswa sesi silwanyana sinomdla kwisebe lomthi, nebhibhi etyheli.
Ndingayibona phi iPine Martens?
Iindawo eziphakamileyo eScotland naseIreland, zezona ndawo zibalaseleyo zokujonga iPine Marten.
5. Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu: I-European Green Lizard
at 40 cm ngobukhulu, kuya kuba nzima ngenene ukuphoswa licikilishe eliluhlaza laseYurophu. Icikilishe elikhethekileyo linomqolo oluhlaza oqaqambileyo kunye nesisu esimthubi. Okubangel 'umdla kukuba, ngexesha lokukhwelana, abesilisa batshintsha umbala umbala oluhlaza oqaqambileyo.
IGreen Lizard ihlala kwindawo ephezulu 2000 mitha, njalo, ngelixa unyuka ezintabeni zase-Austrian, qiniseka ukuba uyabhekabheka. Ukuba uhamba ukusuka ekwindla kuye ebusika, emva koko uya kuwabona la macikilishe emiqolombeni nakwiindawo ezomileyo zokuzimela. kunjalo, kuhlobo, ukuqala ngoMatshi, ezi nzwakazi ziya kuba shushu elangeni.
Ndingayibona phi i-Lizard eluhlaza?
Uyalibona eli cikilishe liluhlaza lihleli elangeni ematyeni, kulo lonke elaseYurophu, Ostriya , Jemani , Ukuya eRomania naseTurkey.
6. Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu: IPinki Flamingo
Iiflamingo ezintle ezipinki zihlala kwenye Eyona ndawo yolondolozo lwendalo eYurophu. Iiflamingo ezipinki zihlala kunye namahashe asendle amangalisayo kwindawo yaseCamargue eFrance. I-flamingo epinki iye yaba luphawu lweCamargue, ngemibala epinki edlamkileyo.
Kumachibi, imarshland, okanye ukubhabha phezulu, bebonisa ubuhle babo, iflamingo epinki ngumbono omangalisayo. Njengoko uhamba kwi 4 iindlela kwiCamargue, uya kusiqonda ngokukhawuleza ukuba kutheni le ntaka yenye ye 12 uninzi lwezilwanyana ezizodwa ukuzibona eYurophu.
Ndingayibona phi iPinki Flamingo eCamargue Reserve?
ICamargue yindawo enkulu yokugcina indawo eFrance. Ukuze ubone le ntaka ekhethekileyo, intloko kwi Ipaki ye-Ornithological.
7. Iminenga eIreland
Ukuba kunokwenzeka ukuba uhamba ngenqanawa kuMazantsi eIreland, kwenye indawo mgama, intloko enamaqhina inokuvela emanzini. Oku kunokuba ngumnenga we-Humpback, Umnenga omangalisayo nomkhulu ohlala kulwandle olujikeleze iIreland.
Ngaphandle kobungakanani bayo obumangalisayo noboyikisayo, 12-16 mitha, azinabungozi kwaye zithambile. Le minenga mikhulu ifika ngasekupheleni kokwindla, becula iingoma zabo ezintsonkothileyo, ihlala phakathi 10-20 imizuzu.
Ndingayibona phi i-Humpback Whale?
Scotland, Ayalend, INgilani ilungele ukubukela iminenga.
8. Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu: Iingcuka
Kuyamangalisa kwaye kuyothusa, Iingcuka zezinye zezilwanyana ezisengozini yokutshatyalaliswa eYurophu. Ezi zilwanyana zahlukileyo zilungelelanisa ngokulula nayiphi na indawo yokuhlala, ngemibala yazo yokuzifihla, kwaye inkulu ngobukhulu. Zininzi iintlobo zeengcuka, kodwa ingcuka yomndilili ingafikelela phezulu 70 ikg.
Iingcuka zihlala emahlathini, kwiipakethe, kwaye yaqwalaselwa njengezilwanyana ezikhuselweyo kakhulu eYurophu. Kukho amaziko olondolozo kunye noovimba ukukhusela iingcuka kunye nokubonelela ngeemeko ezifanelekileyo ukuze zingatshabalali kwaphela.
Ndingazibona phi iingcuka eYurophu?
Umda weLiguria e-Itali, Ihlathi laseBavaria, nePoland ziingcuka’ indawo yokuhlala.
9. Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu: Iidolphins
Ukutshiza nokucula emanzini onxweme lwase-Italiya, amahlengethwa athandekayo ngumbono omangalisayo. Ngelixa wonke umntu mhlawumbi ebonile iidonphin kwimifanekiso, iipaki zamanzi, okanye imizi yogcino-zilwanyana eYurophu, akukho nto ithelekiswa nokuhamba ngolwandle kunye nokuncoma ezi zidalwa zithandekayo.
Elona xesha lilungileyo lokubona ihlengesi kusehlotyeni xa kushushu, kwaye ungaya kukhenketho lokujonga isikhephe dolphin.
Ndingazibona phi iiDolphins e-Itali?
the Unxweme oluhle lweCinque Terre kunye nolwandle lwaseLigurian yindawo efanelekileyo yokubona ihlengesi zasendle e-Itali.
10. Ukubhaskita ii-Shark
Xa abantu abaninzi beva “ukrebe” eyona mpendulo yendalo kukududuzela kunye noloyiko. kunjalo, i-Basking Shark enamandla inokuba nkulu kwaye yoyikise ngokobukhulu, kodwa le krebe itya iplankton kuphela.
ngoko ke, Unokuziva ukhuselekile ngokupheleleyo xa usondela kwezi 12 iithoni kunye 12 iimitha iintlanzi. I-Basking Shark yeyona shark yesibini ngobukhulu e-UK, kwaye eyona nto ibonwa kakuhle emaweni ngexesha lasehlotyeni. ke, ukuba ubona i-fin enkulu engunxantathu kunye nomzimba ongwevu, emva koko umbulise u-hello kwaye ulungiselele ikhamera yakho kwi-Basking Shark snap.
Ndingayibona phi iBasking Sharks Inn e-UK?
kunxweme lwaseCornwell, Isiqithi Samadoda, nonxweme oluninzi lwaseNtshona yeNgilani, ungabona ookrebe be-basking kwindawo yabo yendalo.
11. Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu: IWolverine
Umyalezo, Umyalezo, Igama lesidlaliso le-wolverine ngesiLatini, iguqulelwe kwiGluten. Eli gama lingaqhelekanga lilingana nelona lungu likhulu kusapho lakwaMustelidae – ngokugqibeleleyo kuba banomdla omkhulu ongaqhelekanga.
Ngesi sizathu, Iingcuka zinokuhamba ziye kude zikhangele ukutya, kwaye ngoku inokufumaneka kulo lonke elaseYurophu.
Ndingazibona phi iiWolverines?
Ngokubanzi, inani le-wolverine ligxile eRashiya, iTaiga, naseAsia. Ngaphezu, unokubona ii-wolverines kwi ipaki yezilwanyana zasendle e-UK.
12. Izilwanyana ezizodwa ukujonga eYurophu: Alpine Ibex
Phezulu phezulu 4000 mitha, phakathi kweentaba ezinekhephu, emaweni, uya kufumana i-Alpine Ibex. Ngeempondo ezingakhula ziye 140 i-CM, le bhokhwe yasezintabeni yenye yezona zilwanyana zinomtsalane kwaye zahlukile eYurophu.
Okokuqala, ehlala kwiiAlps zaseYurophu, iAlpine Ibex, akukho lula kangako ukuyibona xa uthelekisa neBasking Shark kunye nocikilishe oluhlaza. ngaphandle, iimpuphu zabo zenza kube lula ukuba i-Ibex inyuke ize ibaleke amarhamncwa kwiiAlps ezinamatye.
Ndingayibona phi iAlpine Ibex?
IiAlps zaseNtaliyane kunye Swiss Alps zimbalwa iimbono ezimangalisayo yezilwanyana zasendle kunye neAlpine Ibex ebukele.
I-Zurich ukuya kwi-Wengen ngoLoliwe
Geneva ukuya eWengen ngoLoliwe
UBern ukuya eWengen ngoLoliwe
I-Basel kwi-Wengen ngoLoliwe
Apha Gcina A Isitimela, Siya konwaba ukunceda ukucwangcisa uhambo lokuya kwiindawo ezintle zokubukela izilwanyana zasendle. Uhambo ngololiwe kulo lonke elaseYurophu lulungele ukuhamba ukuya kwiindawo zokuhlala zezilwanyana ezizodwa eYurophu.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Izilwanyana ezi-12 ezizodwa ukuBona eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funique-animals-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#izilwanyana eyolonwabo IzilwanyanaEYurophu Uninzi lweZilwanyanaIzilwanyanaEYurophu Iimpawu zoLuntu
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSpain, Uloliwe eSwitzerland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe